3M shaqaalaha iyo hawlgabku waxay furi karaan hadiyado u dhigma Noofambar 7-18! - Cuntooyinka giraangiraha
Shaqaalaha 3M iyo kuwa hawlgabka ah waxay furi karaan hadiyado iswaafajin ah Noofambar 7-18!
3M iyo shaqaalaheeda waxay leeyihiin taariikh dheer oo ay ku taageerayaan Cuntada Lugaha Lugta. Tusaale ahaan, kooxaha gaarsiinta goobta shaqada ee 3M waa qaar ka mid ah Cuntooyinka ugu waqtiga dheer ee kooxaha iskaa wax u qabso ku shaqeeya ee Wheels ku xeeran.
Hadda, mahadsanid 3M Foundation, shaqaaluhu waxay haystaan fursad kale oo ay ku muujiyaan taageeradooda waayeelka maxalliga ah iyo dadka naafada ah iyagoo u maraya 3Mgives Thanksgiving Match! Barnaamijkan, 3M Foundation wuxuu la midoobi doonaa tabarucaadka shaqaalaha iyo howlgabnimada la sameeyay Nofeembar 7-18. Sanadkii la soo dhaafay, shaqaalaha 3M iyo kuwa howlgabka ah waxay muujiyeen wax weyn oo loogu talagalay Meals on Wheels, iyagoo ku darsaday $14,925 deeqaha iyo deeq u dhiganta 3M Foundation!
Shaqaalaha 3M iyo kuwa howlgabka ah ee jeclaan lahaa inay ku tabarucaan oo ay ka faa'iideystaan hadiyad u dhiganta oo ka timid 3M Foundation waxay raaci karaan tilmaamahan ku saabsan sida loo furo deeq u dhiganta:
Soo gal barta 3Mgives.com.
Hal Saxeex-Galid ayaa loo heli karaa shaqaalaha. Kuwa howlgabka ah, deeq bixiyuhu wuxuu dejiyaa Xisaab Hadiyad u dhiganta 3M haddii uusan horey u sameynin. Cinwaan emayl ayaa loo galay si deeq bixiyuhu u helo farriin elektiroonig ah oo xaqiijineysa eraygooda sirta ah. Haddii deeq bixiyuhu aanu lahayn xisaab emayl, way isticmaali karaan [email protected]. Tani waxay u oggolaan doontaa inay ka qaybgalaan barnaamijka internetka.
Markaad gasho, deeqbixiyuhu wuxuu xushaa barnaamijka "Ciyaaraha Thanksgiving".
Ka dooro Cunnada Wheels-ka hay'adaha loogu talagalay. Marka macluumaadka loo baahan yahay la buuxiyo, deeq-bixiyuhu wuxuu daabacaa laba nuqul oo ah Kuuboon Aqoonsiga Hadiyadda. Hal kuub ayaa loo hayaa diiwaanka deeq-bixiyeyaasha.
U dir kuubboon labaad, oo leh deeqda, Meals Meals on Wheels. Jeegag ayaa loo diri karaa Metro Meals on Wheels, 1200 Washington, Ave. S., Suite 380, Minneapolis, MN 55415. Hadiyadaha waxaa sidoo kale lagu sameyn karaa khadka tooska ah ku deeqo bogga.
Haddii aad ku tabarucdo khadka tooska ah, weli waa inaad ku diiwaangelisaa hadiyadda nidaamka 3M oo aad ku heshaa Kaadh Aqoonsiga Hadiyadda. Kuuboonku waa in lagu soo diraa (Metro Meals on Wheels, 1200 Washington, Ave. S., Suite 380, Minneapolis, MN 55415) ama emayl loo diro ([email protected]) oo ay la socoto rasiid loogu talagalay hadiyadda internetka.
Xusuusin Muhiim ah:
Si aad xaq ugu yeelatid ciyaarta, deeqaha waa in laga diiwaan geliyaa khadka tooska ah inta u dhexeysa Nov. 7 iyo Nov. 18, 2016.
Waxaa jira ugu yaraan $25 iyo $2,500 ugu badnaan deeq bixiye kasta.
Waad ku mahadsantahay bulshada 3M taageerada joogtada ah ee Cuntada Lugaha!
Nofeembar 7, 2016